macOS Sierra mikendry fanavaozana mandeha ho azy | Avy amin'ny mac aho
macOS Sierra mikendry fanavaozana mandeha ho azy
Ny fisintomana mandeha ho azy dia efa nisy nandritra ny fotoana ela ho an'ireo fanavaozana ny fampiharana hita ao amin'ny Mac App Store, na izany aza izao dia lasa lavitra kokoa io Apple io ary manitatra azy io ihany koa amin'ny rafitra fiasa vaovao, macOS Sierra.
Nanomboka omaly, nifanindry tamin'ny fanombohana a kinova beta vaovao amin'ny fanavaozana manaraka, ny rafitra fikirakira an'i Apple manokana, macOS Sierra, lasa ampahany amin'ny fisintomana mandeha ho azy ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mbola mampiasa ny rafitra teo aloha, OS X El Capitan.
1 macOS Sierra dia hisintona tsy hitanao
2 Ahoana ny fiasan'ny fanavaozana macOS Sierra mandeha ho azy
3 Ahoana raha tsy te hampiasa fampidinana macOS Sierra mandeha ho azy ianao?
macOS Sierra dia hisintona tsy hitanao
Tian'i Apple hatrany ny mpampiasa azy rehetra hitazona ny fitaovany havaozina amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasan-kery manan-kery, ary ny marina dia avo lenta ny haavon'ny zava-bitany. Ny lampihazo ny paoma manaikitra, na finday na birao, dia tsy manana an'io olana mizarazara tena lehibe io izay ananan'ny rafitra hafa. Ireo mpampiasa Apple dia manavao haingana ny solosaintsika sy ny fitaovantsika amin'ireo rafitra fiasa vaovao mba hahafahany manandrana sy mankafy ireo fiasa sy fiasa vaovao omen'ny Apple antsika isaky ny fanavaozana lehibe vaovao. Na hamaha haingana ireo lesoka sy tsy fahombiazana izay efa tsikaritra teo aloha. Saingy tadiavin'ny orinasa ho avo kokoa aza ireo tarehimarika ireo ary noho io antony io dia efa mamela ny macOS Sierra ho tonga ho fanavaozana mandeha ho azy.
Araka ny efa nolazainay, mazava ho azy ny tanjona. Ataovy mora kokoa amin'ny mpampiasa? Eny, izany koa. SAINGY ny tena tanjona dia ny fanavaozana ny fitaovana. Miaraka amin'ny fanavaozana mandeha ho azy ny macOS Sierra, ireo mpampiasa izay mbola mampiasa OS X El Capitan dia hahatsapa ho ampirisihina kokoa hanavao ny solosain'izy ireo.
Ahoana ny fiasan'ny fanavaozana macOS Sierra mandeha ho azy
Raha efa manana fampidinana mandeha ho azy ho an'ny Mac App Store amin'ny solosaina Mac izahay, macOS Sierra dia hanomboka misintona samirery amin'ny solosainao raha vantany vao misy. Ho an'ireo mpampiasa OS X El Capitan dia efa nanomboka ny fisintomana raha mbola tsy nanavao izy ireo. Mazava ho azy, na dia eo aza ny zava-misy fa mandeha ho azy ny fampidinana, ny fametrahana azy dia mitaky alalana mazava avy amin'ny mpampiasa.
Apple dia nizara ity vaovao ity tamin'ny tranonkala The Loop ary nilaza ny orinasa fa macOS Sierra Hisintona amin'ireo solosaina manana ny masamihafa teknika ilaina ihany izy io amin'ny alàlan'ny rafitra fiasa vaovao ary izany, ho fanampin'izay, manana ny habaka fitahirizana ilaina izy ireo.
Apple dia malina amin'ny fisintomana koa. Raha ambany ny habaky ny solo-sainao dia tsy hisintona ny macOS Sierra. Ary koa, raha nakarina izy io ary manomboka mihena ny habaka solo-sainao dia ho voafafa ho azy ny fisintomana.
Noho izany, raha te hiasa araka ny tokony ho izy ity fampiasa ity dia ilaina ny manana toerana ampy amin'ny Mac. Amin'ity fomba ity dia tsy tokony hanahy isika satria Ny fanavaozana dia tsy hamela antsika hiala amin'ny toerana fitahirizana.
Ahoana raha tsy te hampiasa fampidinana macOS Sierra mandeha ho azy ianao?
Ny safidy fampidinana mandeha ho azy dia izany, safidy, noho izany azonao atao ny manafoana azy io isaky ny tianao. Ireo mpampiasa izay tsy maniry ny macOS Sierra misintona ho azy ao amin'ny solosain-dry zareo ary avy eo manana ny rafitra manontany azy ireo raha te-hametraka izy ireo izao na ho avy, dia tokony hanafoana ny fiasa fampidinana mandeha ho azy avy amin'ny System Prefers.
Mba hanaovana izany dia sokafy ny rindranasa "Preferensi System" amin'ny Mac anao, tsindrio ny fizarana "App Store", ary ampidino ny boaty mifandraika amin'ny "Misintoma fanavaozana vaovao azo alaina ao ambadika".
Manomboka amin'io fotoana io, raha te-hanavao ianao dia tsy maintsy manaraka ny fomba mahazatra hatramin'izao: sokafy ny Mac App Store ary mankanesa any amin'ny fizarana "Fanavaozana" ao amin'ny menio ambony. Manokana, Manoro hevitra aho ireo mpampiasa manana fifandraisana Internet "mahazatra", hamono io safidy io Raha toa ka manomboka ny fisintomana raha manao asa lehibe ianao na mijery ilay fizarana amin'ny andianao tianao indrindra, dia mety hiaina fahatapahana ianao.
Hisintona ireo mpampiasa rehetra mandritra ny herinandro ny fisintomana mandeha ho azy MacOS Sierra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » macOS Sierra mikendry fanavaozana mandeha ho azy
Apple dia miomana ny hanokatra ny Data Center faharoa any Eropa, any Danemark ankehitriny
Ahoana ny fiverenana any amin'ny Mac OS X Captain avy amin'ny MacOS Sierra